आजदेखि चिनियाँ खोप शुरु गर्दै सरकार : को-को ले पाउने ? कहाँ गएर लगाउने ? | Nepali Health
२०७७ चैत २५ गते ८:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २५ चैत । सरकारले आजबाट चीनको अनुदानमा प्राप्त ८ लाख डोज कोभिडविरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ लगाउने कार्यक्रम शुरु गर्दैछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो खोप १८ देखि ५९ बर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई दिइने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो खोप काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा गरी ७ जिल्लाका २३ स्थानमा मात्रै दिइने छ । दुई डोज दिनु पर्ने भएकोले यस अभियानमा करीब ४ लाखले खोप पाउने छन् । यो खोप पहिलो डोज लिएको २८ दिन पछि दोस्रो डोज लिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तरगर्तको खोप शाखा प्रमुख डा झलक गौतमले बताए ।
कस कसले लगाउन पाउने छन् यो खोप ?
स्वाथ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार यो खोप १८ देखि ५९ बर्ष उमेर समूहका प्राध्यापकहरु, चीनमा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु, चीनमा अध्ययन गर्न जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति, हिमालय पार व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारीले पाउने छन् । यस्तै अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारी, होटल ट्रेकिङ, विज्ञापन र इन्टरनेट क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, औषधि, फलफुल, तरकारी लगायतका व्यापारीले पनि खोप पाउने छन् ।
यस्तै महाशाखामा खोपका लागि निवेदन दिएका संघसंस्थाहरु र यसअघि खोप लगाउन छुट भएका अंग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरुलाइ पनि यो खोप दिईने निर्देशक डा तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिए ।
कहाँ कहाँ गएर लगाउने खोप ?
महाशाखाले माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले तोकिएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा गएर खोप लगाउन सक्ने बताएको छ । खोप लगाउन जाँदा आफ्नो प्रमाणित परिचयपत्र सहित जान भनेको छ ।